Nagu saabsan - Wuwei Hailun Waxyaabaha Cusub ee Teknolojiyada Co., Ltd.
Ku saabsan Wuwei Hailun
Waxyaabahayagu ugu muhiimsan waa aminoguanidine bicarbonate, aminoguanidinium sulphate, Aminoguanidine Hydrochloride iyo kiimikooyin kale oo wanaagsan, kuwaas oo ah kuwa dhexdhexaad ah oo muhiim u ah dheeha, caafimaadka, sunta cayayaanka, kareemada dareeraha ah iyo meelaha cadarka. Waqtigan xaadirka ah, waxaan haysannaa hanti go'an oo ah RMB 10 milyan Yuan. Daboolaya aag ka mid ah 15,000 mitir murabac ah, shirkaddayadu waxay leedahay 50 shaqaale hadda ah.
Intaa waxaa dheer, shirkadeennu waxay soo bandhigaysaa farsamooyin casri ah iyo qalab ay ku fuliso wax soo saar. Waxaan ku shaqeyneynaa wax soo saar si waafaqsan nidaamka nidaamka ISO9000. Dhanka kale, waxaa jira nidaam tijaabo oo dhameystiran oo lagu hubinayo macaamiisha ballaaran ee leh alaab tayo sare leh. Wax soo saarkayaga ayaa loo dhoofiyay Koonfur Bari Aasiya, Yurub iyo Ameerika.
Ku saabsan Jiaxing Dongliang
Jiaxing Dongliang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. waa laanteena, waxaa la aasaasay sanadkii 2013. Waa shirkad xirfadlayaal ganacsi shisheeye oo ku howlan soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga. Waxay fulisaa ganacsiga gudaha iyo dibedda, Sino wadashaqeyn shisheeye, wax soo saar iskaashi, ganacsi entrepot iyo ganacsi kale.
Inta badan waxay ku hawlan yihiin soo dejinta iyo dhoofinta alaabada ceyriin ee kiimikada kala duwan, cusbada caaga ah, midabbada iyo kaabayaasha, midabka iyo dhexdhaxaadka, badeecada caagga ah, qalabka iyo qalabka korontada, qalabka xafiisyada, dharka irbadaha, qalabka dhismaha, alaabada elektarooniga ah, dharka, kabaha iyo koofiyadaha iyo alaabooyinka kale.